Home Wararka Wasiir Beyle: Soomaaliya waa Mashruuc ee aan wax ka dhaco!!
Wasiir Beyle: Soomaaliya waa Mashruuc ee aan wax ka dhaco!!
Waxaa jirtay hees uu tirsaday oo uu leeyahay “Soomaaliya waa Mashruu” halkaan hoose ka dhageyso heestaas oo ku tilmaansaday sida uu wax u dhacayo.
Runa ahaantii Cabdiraxman Ducale Beyle waxaa uu dalkaan ku yahay dhibaato waxaana muuqata inuu la dagi doono, maadaama uu dhac hantiyeed, haddii laga hortagi lahaa inta uusan dhaawaceedu fogaan uu madaxda iyo shacbiga ka qariyo. Beyle waxaa uu hadda laba guri ka dhistay magaalada Hargeysa waxayna Muqdisho online ku daba jirtaa inay soo ogaato guryahaas.
Hore waxay dad badani ula socdeen in wiil uu dhalay wasiirka Maaliyadda JFS Cabdiraxman Beyle lagu xiray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Istanbul bishii August ee sanadkii 2017. Wiilkan ayaa ka yimid magaalada Muqdisho, waxaana boorso uu watay laga helay lacag dhan $500 kun oo doollar.
Boliska dalkaas ayaa lacagtaas qabtay waxayna wiilkaas weydiiyeen su’aalo badan.Wareysi dheer oo lala yeeshay kaddib ayaa wiilkan uu dhalay Wasiir Beyle uu sheegay in lacagta isaga uu leeyahay una u yimid dalka Turkiga in uu iibsado warshad.
Safaaradda Somalida dalkaas ayaa damiinatay maalmo kaddib, waxayna dawladda Turkiga u sheegeen inay war ka keeni doonaan dawladda Somaliya, laakiin halkaas ayaa u dambeysay sheekadii.
Waxay ahayd markii labaad oo ay dhacdo in wiilkan uu dhalay Wasiir Beyle uu la baxsado lacag aay leedahay dowladda Soomaaliya, sanadkii 2014 mar uu Wasiir Beyle ka ahaa Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa wiilkan waxaa uu bankiga dhexe kala baxay lacag dhan $200 kun oo doollar, taasoo wasiirka sheegay in aanu ogeeyn sababta uu ula baxay.
Haddaba haddii wasiirka uu dalka dhacayo, wiilkiisana uu dhacayo, haddana uu wasiirka uu xisaabaha been ka sheegayo waxay arrintaan dhali doontaa inuu dalkaa gelin doono khasaare dhaqaale oo uusan ka so badbaadi Karin.
Shalay markii uu barlamanka ka hor hadlayey Beyle oo loo soo ururiyey dhammaan golihii wasiiradda inay u sacbiyaan marna kama hadal khaladaadkii xisaabaadka ee la soo bandhigay wuxuusa weerar ku qaaday gudigii oo loo heshiiyey in la kala dilo kadibna lakala diro, warbixintiina la tuuro. Hawshaas oo uu u xilsaarnaa Ku xigeenka labaad ee Golaha shacbiga Mudane Mahad Cawad. MOL waxay is weydiineysaa Mahad ma leeyahay sharciyad u xalaaleyneysa sida uu u dhaqmay oo muqatay afduub iyo nin diran oo hawlo gaar ah fulinaya.
MOL waxay aad uga walaacsan tahay halka dalka lagu wado, haddii wasiiradii ay xadayaan hantidii ummadda, haddii gudoomiyhii gobolka Banadir uu xadaayo, haddii Madaxweynihii uu dalkii hoos geynayo gumeysi cusub waxay u egtahay inay Somaliya ay noqon doonto taariik iyo in la is weydiiyo inay jiritay dal ahaan balsa meelaha ku kala jirta qowmiyad ahaan.
Previous articleDowladaha Britain iyo Germany oo Dowladda Kenya ka caawinaya la dagaalanka Ururka Al Shabaab
Next articleSoomaali afduub ka geeysatay Dalka Kenya oo Sawiradooda lasoo bandhigay
(XOG QARSOON) DFS oo ka been abuureysa jiritaanka caabuqa Coronavirus.
Khayre oo kala diray Gudiga Xalinta Khilaafaadka Galmudug&Amar culus oo labixiyay